स्वास्थ्य पेज » साइक्लिङः मधुमेह नियन्त्रणमा कसरी लाभ मिल्छ ? साइक्लिङः मधुमेह नियन्त्रणमा कसरी लाभ मिल्छ ? – स्वास्थ्य पेज
साइक्लिङः मधुमेह नियन्त्रणमा कसरी लाभ मिल्छ ?
साइक्लिङ गर्दै नेपालगन्जका गगन थापा र उहाँकी छोरी
नेपालमा अझैसम्म पनि साइकल गरिबहरुको साधनको रुपमा चिनिन्छ । तर यसले मानिसको स्वास्थ्यमा राम्रो प्रभाव पार्छ भन्नेमा धेरैले अझै पनि बुझिरहेका छैनन् ।
अर्को एक अनुसन्धानले नियमित ६ वर्षभन्दा धेरै साइकल चलाउने मान्छेमा दीर्घ रोग लागेर मृत्यु हुने जोखिम ३५ प्रतिशतसम्म कम हुने गरेको पाइएको छ । यो साइकलमा यात्रा नगर्नेहरुको तुलनामा निकालिएको तथ्यांक हो ।
१० भाद्र २०७८, बिहीबार प्रकाशित